I-LA CASA QUADRA - IINDLU ENEGADI NE-TERRACE
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguQuadra S.R.L.
Igutyungelwe ngokupheleleyo yiWiFi yasimahla, indlu ibonelela ngendawo yokuhlala eFontanelle, iimitha ezimbalwa ukusuka kwisikwere senqununu. Onawo uya kufumana igumbi lokuhlala, umabonwakude wescreen esicaba kunye nekhitshi eligcwele zonke izixhobo ezifunekayo. Kuhle ukuba ufike ngemoto ukuze uhlale ngelixa usebenza okanye ukuzonwabisa. Indlu ineyadi yangasese, efikelelekayo ngamasango amabini ombane akuvumela ukuba upake iimoto zakho ngokukhuselekileyo.
Ubhaliso lwe-ID yeVeneto: M0260280002
ILa Casa Quadra, (iphondo laseTreviso, iikhilomitha ezi-6 ukusuka e-Oderzo kunye neekhilomitha ezili-14 ukusuka eConegliano) ikwindawo ezolileyo kakhulu kwaye inika bonke ubutofotofo bokuhlala wedwa, nabahlobo okanye usapho. Ibekwe kwintlambo yeTreviso, kwicala lasekhohlo lasePiave. Ekubeni indlu ikwindawo yobuchule, iindwendwe zingayisebenzisa njengendawo yokuqala yokutyelela iindawo ezikufutshane ezifana neTreviso, iVenezia kunye neziqithi zayo ezintle, iDolomites kunye neendawo zokungcebeleka zase-Adriatic Sea (Jesolo, Caorle, Bibione kunye neLignano) . Ngaphaya koko, le ndawo iphawulwa ziifama ezininzi-apho ungonwabela ukutya okuqhelekileyo kweVeneto- kunye neendawo zokuthengisa iwayini ezidumileyo ezaziwa kwihlabathi liphela ngewayini yazo exabisekileyo, ngakumbi iProsecco. Indlu ifanelekile ukuba ngubani ofuna ukuphumla kunye nabani na ofuna ukufunda ngeVeneto, kodwa nakwabo bafuna indawo etofotofo, enoxolo kunye nendawo eqhelekileyo yokuphumla ngexesha lohambo lomsebenzi. Indlu iye yalungiswa ngokupheleleyo ngo-2019.
50" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Netflix
Le ndlu ikwilali yaseVeneto eluhlaza kwaye ikufuphi ne-Oderzo, isixeko esiyimbali saseMarca Trevigiana, apho ungandwendwela imyuziyam ebalulekileyo yezakudala kunye namabhodlo aseRoma anika ulwazi malunga nembali yembali ye-Oderzo njengendawo ephawulekayo yendlela (Municipium) uBukhosi baseRoma. Umamkeli angakuvuyela ukucebisa eyona ndawo yokutyela kunye nezindlu zasefama apho unokungcebeleka khona iProsecco neCartizze eyaziwayo, okanye iwayini ebomvu egcwele umzimba (Raboso del Piave Superiore, Cabernet okanye Merlot), okanye ungcamle ezona sisi I-Casatella ekhrim okanye i-cheese imbriago – ethetha 'isonka samasi esinxilisayo'), i-asparagus, i-cherries, i-chestnuts, umngundo, inyama enyangisiweyo kunye nekeyiki edumileyo iTiramisù. Indlu ibekwe entliziyweni ye-Fontananelle, iimitha ezimbalwa ukusuka kwiholo yesixeko kwaye, ngaphambili kukho iPasticceria Fabris eyaziwayo, indawo efanelekileyo yokuthatha ikhefu kwaye udle iipasti zabo ezimnandi. Malunga neemitha ezingama-200 ukusuka kwindlu kukho ivenkile enkulu kunye nevenkile ethengisa inyama.
Yiyiphi kwiimitha ezili-150 ukusuka kwindlu kukho iikhefi ezine kunye nepizzeria.
Umbuki zindwendwe ngu- Quadra S.R.L.
Sisesandleni sakho ukukubonisa indlu, izixeko ezikufutshane kunye nazo zonke iindlela ezilungileyo zokuzindwendwela phambi nangexesha lokuhlala kwakho. Ukungena kunokwenzeka nangaliphi na ixesha kwaye ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo nokuba ufika ebusuku. Siza kukubonelela ngeekhowudi zokufikelela kunye nolwazi lokufikelela kwindlu ngokuzimeleyo. Akuyi kubakho mntu ekhaya ngexesha lokuhlala kwakho kwaye uya kuyisebenzisa kuphela. Siza kukushiya abafowunelwa bereferensi kunye namanqaku okubhekisela kuzo zonke iimfuno zakho. Siya kufumaneka kuzo zonke izicelo zakho ngaphambi, ngexesha nasemva kokuhlala kwakho.
Ukuba unezicelo ezikhethekileyo, nceda usazise kwiintsuku ezimbalwa ezingaphambili ukuze silungiselele ukuzanelisa.
Sisesandleni sakho ukukubonisa indlu, izixeko ezikufutshane kunye nazo zonke iindlela ezilungileyo zokuzindwendwela phambi nangexesha lokuhlala kwakho. Ukungena kunokwenzeka nangal…
UQuadra S.R.L. yi-Superhost
Inombolo yomthetho: M0260280002